के सर्जिकल/मेडिकल मास्कलाई स्यानिटाइजर छर्केर पुन:प्रयोग गर्न मिल्छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर सोमबार, साउन ३२, २०७८, १२:१८:२६
प्रश्न: के सर्जिकल/मेडिकल मास्कलाई स्यानिटाइजर छर्केर पुन:प्रयोग गर्न मिल्छ?
स्यानिटाइजर छर्किएर सर्जिकल/मेडिकल मास्क प्रयोग गर्दा मास्क भिजेर यसको प्रभावकारीता घट्न सक्छ। सर्जिकल/मेडिकल मास्क एक पटकको प्रयोगको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म एक चोटि प्रयोग गरेपछि यस्ता मास्क पुन:प्रयोग गर्नु हुँदैन।
कोभिड संक्रमणबाट बच्नका लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ। मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने र साबुनपानी वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्नु अनिवार्य छ।